Wararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Mbappe, Raphinha, Azpilicueta, Barkley, Digne, Umtiti, Emerson Palmieri
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Mbappe, Raphinha, Azpilicueta, Barkley, Digne, Umtiti, Emerson Palmieri
December 29, 2021 Warka Xiisaha Leh, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka France Kylian Mbappe ayaa sheegay inuusan u dhaqaaqi doonin Real Madrid bisha Janaayo uuna sii joogi doono Paris St-Germain ilaa ugu yaraan dhamaadka xilli ciyaareedka. 23-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa kooxda Ligue 1 waxa uu dhacayaa xagaagan. (CNN)
Garabka Leeds United Raphinha ayaa lala xiriirinayay Liverpool iyo Bayern Munich , laakiin 25 jirka reer Brazil ma doonayo inuu dhaqaaqo Janaayo. (Mirror)
Barcelona ayaan wali ka quusan in ay isku daydo saxiixa daafaca Spain Cesar Azpilicueta oo 32 jir ah iyo daafaca Denmark Andreas Christensen oo 25 jir ah kana tirsan kooxda Chelsea. (Sport)
Everton ayaa ka hadashay suurtogalnimada ay ugu dhaqaaqi karto saxiixa 28 jirka khadka dhexe ee England iyo ciyaaryahankii hore ee Ross Barkley oo ay amaah kaga soo qaadatay Chelsea inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. (Telegraph)
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay isku daydo inay la soo wareegto 28 jirka daafaca bidix uga ciyaara Everton Lucas Digne, iyadoo Blues ay u badan tahay inay muddo dheer ka maqnaan doonaan daafaca reer England Ben Chilwell, oo 25 jir ah, sababtoo ah dhaawac jilibka ah. (90min)
Chelsea ayaa laga yaabaa inay dib ugu yeerto 27 jirka daafaca bidix ee Italy Emerson Palmieri amaahdii uu ku joogay Lyon, ama 19 jirka reer Holland Ian Maatsen oo ka yimid Coventry City. (Goal)
Weeraryahanka Czech Republic Patrik Schick, oo 25 jir ah, ayaa bartilmaameed u ah kooxo badan oo Premier League ah – waxaa isha ku hayay Arsenal, Everton, Manchester City, Tottenham iyo West Ham bilihii u dambeeyay – laakiin Bayer Leverkusen kuma degdegsana inay iibiso ciyaaryahan. kaasoo qandaraas kula jira ilaa 2025. (90 Min)
Manchester City ayaan la soo saxiixan doonin beddelka weeraryahanka reer Spain Ferran Torres, oo 21 jir ah, ka dib markii uu u dhaqaaqay Barcelona bishii Janaayo si uu waqti badan u siiyo ciyaartoyda da’da yar sida 19 jirka Ingariiska Cole Palmer. (Times)
Arsenal ayaa ku qasbanaan doonta inay Lyon siiso 38 milyan ginni si ay ula soo wareegto 24 jirka khadka dhexe ee Brazil Bruno Guimaraes. (Football.London)
Newcastle ayaa u dhaqaaqeysa daafaca dhexe ee France Samuel Umtiti, iyadoo Barcelona ay dooneyso inay iska iibiso 28 jirkaan. (Marca)
Newcastle ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay keento weeraryahanka Brazil Gabriel Barbosa bisha Janaayo, laakiin 25 jirkaan ayaa doorbidaya inuu sii joogo Flamengo. (Mirror)
25-jirka weerarka uga ciyaara Aston Villa Wesley ayaa dalab ka helay Internacional iyo Sao Paulo si uu ugu laabto Brazil bisha Janaayo. (Dailymail)
Weeraryahanka Talyaaniga Lorenzo Insigne, oo qandaraaskiisa Napoli uu dhacaya xagaaga, ayaa lagu tijaabiyay dalab ka yimid Toronto FC , kooxda Major League Soccer ayaa riixeysa inay la soo wareegto 30 jirkaan Janaayo. (Sky Sport Italia)
Insigne ayaa diyaar u ah inuu doorto u dhaqaaqista Toronto ama Tottenham iyo Inter Milan midkood . (Mirrror)
Juventus ayaa dooneysa inay wax ka bedesho shuruudaha qandaraas kordhinta ee ay la gashay 28 jirka reer Argentina ee Paulo Dybala, kaasoo xor u ah inuu baxo marka uu qandaraaskiisu dhaco xagaaga. (La Gazzetta dello Sport)
Middlesbrough ayaa ku dhow inay u dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka Republic of Ireland Aaron Connolly, oo 21 jir ah, kaasi oo amaah kaga imaanaya Brighton. (Dailymail)